Waa maxay farqiga u dhexeeya, qorshaha HMO iyo qorshaha PPO Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Juun 19, 2020
Marar badan, xubnaha waxay noo sheegaan inay qiimeeyaan xiriirka ay la leeyihiin dhakhaatiirtooda. Oo ma ahan wax layaab leh. Waxaa laga yaabaa in lagu bixiyay waqti iyo dadaal badan in la helo dhakhaatiirta aad jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay. Haddii aad raadinayso qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah, waxaa laga yaabaa inaad ku aragto ereyada “HMO” iyo “PPO” oo loo isticmaalo in lagu qeexo qorshayaasha caymiska caafimaadka ee kala duwan. Waa maxay fariga u dhexeeya? Oo midkee fiican, HMO ama PPO? Iyagoo dhan waxay xiran yihiin dooqa dhakhaatiirta. Akhri si aad u ogaato sababta.
Dib-u-eegis degdeg ah oo ku saabsan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxaa loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Qorshayaashaan sida caadiga ah waxaa ku jira macaashyo iyo sifooyin siyaado ah oo kaa caawinaya daboolida daryeelkaaga iyo kharashaadkaaga. Waxaadna ku heli kartaa iyagoo dhan wax ka hooseeya $0 carbuunta qorshaha.
Maxaa loola jeedaa HMO?
HMO waxay u taagan tahay Ururka Joogtaynta Caafimaadka. Xubnaha qorshayaasha HMO waa inay u tagaan bixiyeyaasha ku jira shabakadda si ay u helaan daryeelka iyo adeegyada. Taas macnaheedu ma ahan in aaysan abid booqan karin dhakhtar aan ku jirin shabakada HMO. Balse, haddii aysan jirin xaalad degdeg ah, xubintu waxaa laga yaabaa inay bixiso dhammaan kharashka daryeelkiisa caafimaad.
Maxaa loola jeedaa PPO?
PPO waxay u taagan tahay Ururka Bixiyaha La Doorbido. Marka lagu jiro Qorshaha PPO, xubnuhu wali waxay heli karaan shabakad maxalli ah oo dhakhaatiir iyo isbitaallo ah. Balse sidoo kale waxay haystaan dabacsanaan ay ku booqdaan bixiye kale oo joogta meel kasta oo Mareykanka ah. Taasi waa ilaa iyo inta uu dhakhtarku kaqaybqaato Medicare oo uu aqbalo qorshaha caafimaadka xubinta. Haddii xubnaha ku jira qorshaha PPO ay doortaan inay ka baxaan shabakadda PPO, qadarta carbuunta qorshahooda, lacagta go'an ee caymiska ama lacagta ku soo aado caymis-haystaha waxa laga yaabaa inay sarreeyaan.
Qorshayaasha aad rabto waxay ku xirnaan karaan halka aad ku nooshahay.
Dhammaan qorshooyinka caafimaadka lagama heli karo gobol kasta oo ku yaala dalka oo dhan. Haddii aad haysato ikhtiyaar aad ku doorato qorshaha caafimaadka HMO ama PPO iyo haddii kale waxay ku xiranaan doontaa halka aad ku nooshahay. Waxa ka muhiimsan wax kasta, waa inaad heli karto dhakhtarka daryeelka aasaasiga ah iyo dhakhaatiirta kale ee aad jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay.
Eeg inay dhakhaatiirtaada ay ku jiraan shabakadayada.
Qalabkayaga raadinta ee onlaynka ah wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho dhakhtar, takhasusle ama bixiye kasta oo kuu dhow oo ku jira shabakadda.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 03:00 GALABNIMO CDT